Posted by Tranquillus | Feb 10, 2021 | Shabakada
Waqti dheeri ah: culeyska la wadaago ee caddeynta
Culayska caddaynta jiritaanka wakhtiga dheeriga ahi kuma eka shaqaalaha oo keliya. Culeyska cadeynta waxaa lala wadaagayaa loo shaqeeyaha.
Sidaa darteed, haddii ay dhacdo khilaaf ku saabsan jiritaanka saacadaha dheeraadka ah, shaqaaluhu wuxuu soo bandhigayaa, isagoo taageeraya codsigiisa, macluumaad ku filan oo ku saabsan saacadaha aan la bixin ee uu sheeganayo inuu shaqeeyay.
Waxyaabahani waa inay u oggolaadaan loo shaqeeyaha inuu ku jawaabo iyagoo soo saaraya cunsurro u gaar ah.
Garsoorayaasha maxkamada waxay sameystaan ​​xukunkooda iyagoo tixgelinaya dhamaan waxyaabaha jira.
Waqti Dheeraad ah: Cunsurro ku filan oo sax ah
Xukunka Janaayo 27, 2021, Maxkamadda Asluubtu waxay caddeysay fikradda ah “curiyeyaal ku filan oo saxan” oo shaqaaluhu soo saaro.
Kiiska la go'aamiyay, shaqaaluhu wuxuu si gaar ah u weydiistay bixinta waqtiga dheeriga ah. Tan darteed, wuxuu soo saaray bayaanka saacadaha shaqada ee uu tilmaamay inuu dhameystiray mudadii la tixgelinayay. Tiradan ayaa la xusay maalinba maalinta ka dambaysa, saacadaha adeegga iyo dhammaadka adeegga, iyo sidoo kale ballamo xirfadeed iyada oo la xusaayo dukaanka la booqday, tirada saacadaha maalinlaha ah iyo wadarta toddobaadlaha ah.
Loo shaqeeyaha ma uusan bixin wax macluumaad ah oo jawaab u ah kuwa uu soo saaray shaqaaluhu ...
Caddaynta waqtiga dheeriga ah: shaqaaluhu maahan inuu muujiyo wax jabin ah July 10th, 2021Tranquillus
READ Dhaqdhaqaaqa magaalooyinka ee Afrika
horeFebraayo 9, 2021 Kala guur wadareed: aalad cusub oo loogu talagay dhaqdhaqaaqa mihnadleyda Transco waa aalad siisa tababar shaqaalaha dib ugu tababbarka qaybaha horumarinta howlaha, markay ka shaqeeyaan qaybaha hoos u dhaca dhaqaalaha.
socdaHagaaji qaabka qoraalkaaga: isku xirayaasha macquul ah
Adeegga macaamiisha ee telefoonka